Ukuthengisa kubasebenzisi beSmartwatch: Uphando ekufuneka uyazi | Martech Zone
Ukuthengisa kubasebenzisi beSmartwatch: Uphando ekufuneka uyazi
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 3, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ngaphambi kokuba ufunde le posi, kuya kufuneka wazi izinto ezimbini ngam. Ndiyazithanda iiwotshi kwaye ndingumntu othanda iApple. Ngelishwa, ukungcamla kwam kwiwotshi akuhambelani nexabiso lethegi kwimisebenzi yobugcisa endifuna ukuba nayo esihlahleni sam-ke ngoko iApple Watch yayinyanzelekile. Ndicinga ukuba ayindim ndedwa ocinga njalo, nangona kunjalo. Ngokwe-NetBase, i I-Apple Watch ibetha uRolex kwintetho zentlalo.
Khange ndibenathemba liphezulu lokuba iApple Watch iya kuwuguqula umsebenzi wam okanye ubomi bam, kodwa ndichukumisekile yimpembelelo ebenayo. Ngelixa uninzi lwabahlobo bam bebotshelelwe kwii-smartphones zabo, ndihlala ndiyishiya ifowuni yam kufutshane kwaye ndilibale ngayo imini yonke. Ndicocile kuphela usetyenziso endinqwenela ukwaziswa ngalo ngokubukela. Ngenxa yoko, andifikeleli kwifowuni yam kwaye ndilahleka eludakeni lwezaziso zeapp kule yure izayo. Oko kukodwa kuyenzile utyalo-mali oluxabisekileyo kwimveliso yam.
Uphando lweKentico's Smartwatch lunyanzeliso lwe-10th yokuqhubekeka kochungechunge lwayo oluqhubekayo lweKentico Digital yamava oPhando. Ngaphandle kwentengiso yokunqongophala, phantse i-60% yabaphenduli bangathanda ukuba neyabo i-smartwatch; kunye ne-36% iceba ukwenza njalo kunyaka olandelayo.
Khuphela uPhando lweKentico's Smartwatch
Ii-Smartwatches zibonisa ithuba elikhethekileyo lokuba banokuqhuba ii -apps zomntu wesithathu. Ke ngelixa abenzi bezixhobo bezama ukwenza iimeko zokusebenzisa ezinyanzelayo kwi-smartwatch, iimveliso kunye nabathengisi kufuneka bagcine iso elikufutshane kwiscreen esincinci.
Isinye kwisithathu sabaphenduli siyithandile imbono yokufumana umkhombandlela, ukulandelela ukutya kunye nokuba sempilweni, ukukhangela okuvunyelwa lilizwi, kunye nezilumkiso zexesha lokwenyani kwindiza, ebhankini okanye kwinethiwekhi yoluntu ngewatchwatch. Iimephu ze-Apple kunye nokudityaniswa kweWatch kuhle kakhulu ...
Abasebenzisi abongezelelweyo beSmartwatch:
Iipesenti ezingama-71 zabathengi ziya kulunga xa kukhethwa intengiso eziswe kwi-smartwatch
I-70% yabathengi bakholelwa ukuba baya kusebenzisa i-smartwatch ukuzisebenzisela kuphela
Uninzi lwabaphenduliyo bathi bonwabe kakhulu ngombono wokufumana ii-imeyile kunye nemibhalo kwi-smartwatch yabo.
Nantsi i-infographic enkulu eyaphula ezinye zeziphumo:
I-Kentico yi-CMS yonke-in-nye, i-E-commerce, kunye neqonga lokuThengisa kwi-Intanethi eliqhuba iziphumo zeshishini kwiinkampani zabo bonke ubungakanani bobabini kwindawo okanye kwilifu. Inika abathengi kunye namaqabane anamandla, izixhobo ezibanzi kunye nezisombululo zabathengi ukwenza iiwebhusayithi ezimangalisayo kunye nokulawula amava abathengi ngokulula kwimeko yeshishini elinamandla. Isisombululo esityebileyo seKentico Web Management Management Solution yamalungu ewebhu angaphandle kwebhokisi, ukwenza ngokwezifiso ngokulula, kunye nokuvula API ngokukhawuleza yenza ukuba iiwebhusayithi zisebenze. Xa zidityaniswe neseti epheleleyo yezisombululo ezihlanganisiweyo, kubandakanya ukuThengiswa kwe-Intanethi, i-E-commerce, uLuntu oluKwi-Intanethi, kunye ne-Intranet kunye nokuBambisana, iKentico ilungiselela ngokupheleleyo amava abathengi bedijithali kwiindlela ezininzi.
tags: i-apula ukulindaIkenticoiwotshi yesamsungsmartwatchukwamkelwa kwe-smartwatchukubukela
Ukusuka kuLuntu ukuya ku-Phezulu-inkcazo yokuqonda kwengqondo